Maalin: Janaayo 23, 2017
Olole saxeexan ayaa laga soo horjeedsaday inuu ka gudbo wadada tareenka ee dhex marta Belgrade Forest: Waxaa la bilaabay olole saxeex ah Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul si looga fogaado in tareenka uu ku sii gudbayo Belgrade Forest, oo ah mid ka mid ah qaybaha gaarka ah ee Waqooyiga Waqooyiga, iyo si looga fogaado taabashada Belgrade Forest. text, [More ...]
Idaacadda Adnan Menderes ee Tareenka xawaaraha sare leh ee Aydine
Izmir Adnan Menderese tareenka xawaaraha sare ku socda bedelkii loo qorsheeyay Ayd scheduledna: Waqti aad u badan ayaa ajandaha ay u soo qaadeen dadka wax garadka ah ee 'Duulimaadka garoonka diyaaradaha ee' scheduledldır Airport 'waxa loo qorsheeyay in la bilaabo ololaha' dhexdhexaadin ' Guddoomiyaha Aydın Ömer Faruk Koçak, [More ...]
Erciyes ayaa jabiyay laba diiwaan oo kala duwan dhamaadkii wiigga
Erciyes wuxuu jabiyay labo rikoor usbuuca dhamaadkiisa: Erciyes, oo kamid ah xarumaha barafka ee aduunka ugu muhiimsan iyadoo maalgashi la sameysay Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri, ayaa jabisay labo rikoor usbuuc dhamaadkii. 22 60 wuxuu yimid Erciyes Axadda, Janaayo [More ...]
Helitaanka Xarunta Derbent Aladag Ski Center: Gudoomiyaha Konya Yakup Canbolat iyo Duqa magaalada Tahir Akyurek Tahir Akyürek Derbent xarumood baraf ah oo la qorsheeyay in laga dhiso Aladag ayaa laga helay. Madaxweyne Akyürek, mid gaaban, dhexdhexaad ah iyo [More ...]
Hawlaha Tareenka Dhulka Dudullu-Bostancı ayaa Bilaabmay: Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul Kadir Topbaş Metro Metro meelwalba oo Meel walba ah ”waxaa lagu bilaabay hal-ku-dhigga cusub ee gaadiid cusub. Ku shaqeynta dhinaca Anatolian [More ...]
Guddoomiyaha Gaadiidka Turkiga-Badda-ilaa-Cankes jawaab-celin xumo: Guddoomiyaha Gaadiidka Turk -erafettin Deniz, Madaxa Gaadiidka-Guddoomiyaha Canshuuraha Can Cankesen'in "oo laga sameeyay DHMİ 100 sano" ayaa si adag uga falceliyay. Turkiga [More ...]
Wadooyinka iyo saldhigyada Magaalada Gebze Metro waa la shaaciyey: Kocaeli Magaalo-Weyne ayaa qaaday tillaabadii ugu horreysay ee la taaban karo ee mitrooga, taasoo qasab ku noqotay mustaqbalka magaalada. Wadada loo maro Gebze Metro ayaa la go'aamiyay. Shisheeye weyn [More ...]
Shirka Guud ee caadiga ah ee Sarkaalka Gaadiidka – Sen Istanbul 2 Laanta: 2 ee Sarkaalka Gaadiidka-Sen Istanbul 2 Laanta Gudoomiyaha Golaha guud ee caadiga ah Can Cankesen, kuxigeenadiisa İbrahim Uslu iyo Tümer [More ...]
Mashruucyo waawayn ee 2017
Mashaariicda culus waxay ku yimaadaan nolosha 2017: Mashruucyada Mega oo adduunka ku eegaayo masayr ayaa kusii socda xawaare buuxa. In kasta oo aasaaska Kanal Istanbul, oo loo yaqaan Mashruuca Crazy, la dhigay sannadkan, dalabyada loogu talagalay 1915 Çanakkale Bridge ayaa la heli doonaa bisha 26. [More ...]
Iskudhufka Gacanka Jasiiradaha İzmir kuma wada imaan doono labada dhinac ee Izmir
Haddii la sameeyo Isgoyska İzmir Bay, labada dhinac ee İzmir ma isugu imaan doonaan [More ...]
Wasiirka arimaha dibada, xawaaraha tareenka ee BTK 2 ayaa wali sii socota
Wasiirka Arslan wuxuu ka tagay shaqadeena billaha ah ee 2 khadka tareenka ee BTK: Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa ka sheegay dhismaha Baku-Tbilisi-Kars khadka tareenka. Hada mashquulsan [More ...]
Wasiirka Avcı, Marmaray oo shaqeynaya saameyn kuma yeelan dhulka
Wasiirka Avcı, daraasadaha Marmaray wax saameyn ah kuma yeelan dhulka: Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Nab Avcı, mashaariicda sida Marmaray iyo tuneelada Eurasia ayaa la fuliyaa kahor bilowga dhismaha, falanqaynta saameynta deegaanka iyo warbixinno lama huraan ah ayaa la sameeyaa intaas ka dib. [More ...]
Warshadda Dayactirka ee Malatya Wagon lama iibin, Xarunta Ganacsiga Saadka ayaa noqoneysa: Kastamka iyo Wasiirka Ganacsiga Tüfenkci, waxay u tageen inay xiriirro kala duwan la sameeyaan wariyeyaasha Malatya ee quraacda kula kulmay. Quraacda Tüfenkci ka dib, maalgashiga Malatya, [More ...]